Ahoana ny hitazonana ny aim-panahy ?
2 Korintiana 13:5« Diniho ny tenanareo, na mitoetra amin'ny finoana ianareo, na tsia; izahao toetra ny tenanareo. Moa tsy fantatrareo va ny amin'ny tenanareo, faao anatinareo Jesosy Kristy, raha tsy olona nolavina ianareo ? »
Mahasoa hatrany ny mandini-tena ahazoantsika miomana amin’ny fotoana rehetra eo amin’ny fiainana. Ny maha-sarotra azy matetika dia satria ny olona tsy manam-paharetana na tsy matanjaka.
Inona no mahatonga ny olona tsy manana faharetana eo amin’ny aim-panahy ?
Amin'izao vaninandro izao dia ny anarana maha kristiana no matetika voatazona fa tsy ny AIM-PANAHY ho an'ny kristiana maro. Tsarovy fa tena iankinan'ny ho avinao tanteraka ny faharetana, tsy ny ho avinao eto an-tany ihany, fa ny fiainana mandrakizay mihitsy. Tsy ny anarana fikambanana na fiangonana no zava-dehibe fa ny hitazonana ny aim-panahy, ny Tenin'Andriamanitra ao anaty mandritra ny fotoana ahavelomana sy iainana ! Izany hoe ny tsy fiovàna mihitsy.
Raha ny marina dia tokony handroso sy hiorim-paka aza ny aim-panahy Isaia 40:31 « Fa izay miandry an'i Jehovah dia mandroso hery kosa ; Elatra no hiakarany tahaka ny voromahery ; Hihazakazaka izy, nefa tsy ho sasatra ; Handeha izy, nefa tsy ho reraka. »
Tsy ny anarana entina ao amin'ny fikambanana na ny andraikitra raisinao amin'ny asan' Andriamanitra no zava-dehibe fa ny fitehirizana ny fiainam-panahy.
Ireto zavatra roa ireto no anisan’izay tsy maintsy fantarintsika : Izay tsy manam-pahamasinana sy izay tsy madio fo. Betsaka ny ho diso fanantenana indray andro any ka izay no ilàna ny fandinihan-tena. “ Diniho ny tenanareo na mitoetra amin'ny finoana hianareo na tsia ”, (I Korintiana).
Fantaro ary ireo dingana efatra tsy maintsy andalovana mba ahatongavana amin’izany fiainam-pahamasinana sy fahadiovam-po izany :ny fahaterahana indray, ny fahazazana, ny fahalebiazana, ny fanahafana an'i Kristy Jesosy. Tsy maintsy lalovana ary tsy azo dinganina ireo filaharana ireo.
Ahoana no ahazoana ny fiainam-panahy miorina tsara “stabilité spirituelle” ?
I - Ny"stabilité spirituelle"
Misy fanamarihana vitsivitsy ireto :
A/Mila tandremantsika tsara ireo hevi-diso mpahazo : misy mihevitra fa rehefa manana andraikitra ara-pivavahana (mpitondra fikambanana, mpitondra fiangonana, pretra...) dia mihevi-tena fa efa lehilahy sy vehivavy lehibe ! . Sao dia mbola toetran-jaza anefa no ao aminao ? misy ireo dingana tsy maintsy tratrarin'ny mpanompon'Andriamanitra sy ny mpitondra fivavahana dia ny fanahafana an'i Kristy (izay atao rehetra eo amin'ny fiainana : toetra, fitondran-tena...) izany hoe Jesosy no tsy maintsy modely eo amin'ny fiainana manontolo.
Satria mantsy ny tanjon'ny fiainana kristiana dia ny fanantenana sy ny fibanjinan’ny saina sy ny maso hatrany ny Mandrakizay mandra-piala eto an-tany.
B/Matetika ny olona eo amin'ny fiainany dia : na tsy mibanjina ilay tanjona, na koa diso ilay tanjona. Marihina fa ny tanjona dia tsy ny hanafaka ny olana misy eo amin'ny fiainanao, na koa ny hahatafita ny tena eo amin'ny fiarahamonina akory, na ny hahatafavoaka anao,fa ny Mandrakizay. Ny ety ambonin'ny tany mantsy ho levona ! hoy ny Tenin'Andriamanitra Matio 24:35 « Ny lanitra sy ny tany ho levona, fa ny teniko tsy mba ho levona. » ary koa Filipiana 3:20 « Fa ny fanjakantsika dia any an-danitra, ary avy any koa no iandrasantsika Mpamonjy, dia Jesosy Kristy Tompo »
Mila tandremana tsara noho izany ilay Mandrakizay tsy ho votsotra ka ho very.
D/ Misy fitsipika sy torolalala ary tari-dalana ao anaty Baiboly ahazoanao mahatratra ilay Mandrakizay. Jereo ange : mangataka hatrany isika mba hisian’ny fifankatiavana eto amin’ny firenena, tsara izany, fa izao : ny tenanao no diniho voalohany indrindra, ianao ohatra mangataka fandeferana, dia ianao aloha no mila manomboka izany fandeferana izany eo amin’ireo rahalahinao kristiana.
Ny hoe mandini-tena araka an’Andriamanitra dia ny tenanao aloha no jerena tarafina amin’ny tenin’Andriamanitra, fa tsy araka izay heverin’ ny olona ny momba anao akory - satria iza moa ny mahatonga ny firenena ? izaho sy hianao. Aza mandeha lavitra fa atombohy amin'ny fifandraisanao amin'ny vadinao na ny zanakao aloha....
Maninona moa isika no tsy mahazo valim-bavaka araka izay andrasantsika matetika ? Isaia 59:2 «Fany helokareo no efitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitrareo, ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo, ka dia tsy mihaino Izy. » diniho ny tenanao mba hampisy vokany ny vavaka fa tsy misy mahalala an'io tenanao io afa-tsy hianao sy ny Tompo ihany. Rehefa mandini-tena hianao dia araho tsara ny torolalan'ny Filazantsara 4 sy ny Epistily.
Miaraka amin'izany fandinihan-tena izany dia tsara ho fantatra koa hoe vaninandro manao ahoana àry izao iainantsika izao araka ny Tenin'Andriamanitra ? Vakio ny Matio 24 sy ny Lioka 2, 1 Timoty 4, 2 Timoty 3. Raha ireo teny ireo ihany ohatra no jerena sy dinihina dia mazava fa hamarana ny tantaran'ity izao tontolo izao ity tsy ho ela Andriamanitra. Ho olona manao ahoana izaho sy ianao hiatrika izany ?
ohatra : Anisan’ny toe-javatra manambara ny ho fiafaran’izao tontolo izao io ady ao Moyen Orient io, miampy ny fisian’ny krizy ekonomika maneran-tany. Ary dia ho avy ny Jerosalema vaovao nampanantenain’Andriamanitra.
Efa voalazan’ny Tenin’Andriamanitra mialoha daholo izao fisehoan-javatra rehetra izao. Isika kristiana izany dia mila mahafantatra tsara izay ambaran’ny Baiboly mba hananantsika fahatoniana na "stabilité" tsara manoloana ny trangan-javatra mampahory rehetra satria efa voalaza mialoha avokoa daholoireny hita sy rentsikaireny,
ohatra : ho tia tena ny olona, tia vola ...2 Timoty 3:2 « Fa ny olona ho tia tena, ho tia vola, ho mpandoka tena, mpiavonavona, miteny ratsy*, tsy manoa ray sy reny, tsy misaotra, tsy manaja izay masina, [* Gr. manao blasfemia; izahao Mat. 9,3] » indraindray aza dia ny samy kristiana izao nomifampitifitra.
Koa aza malahelo na reraka ny fonao raha misy olona be dia be tia vola... tsy afaka mandositra an'izany isika fa hianao no miambenatsy ho tratran'izany ! Hisy hatrany izany eto ambonin'ny tany ary mampiseho antsika ny fahamarinana sy ny fahatanterahan'ny Tenin'Andriamanitra.
Fa diniho tsara ny tenanao, ny fisehoan-javatra rehetra dia tsy mampihontsona rehefa mitoetra tsara eo amin'ny Tompo hianao,Jaona 14:27 « Fiadanana no avelako ho anareo,ny fiadanako no omeko anareo;tsy tahaka ny fanomen'izao tontolo izao no fanomeko anareo. Aza malahelo na matahotra ny fonareo. » izany no harena ! Aza atao mahataitra ny areti-mandringana, ny fitondran-tena maloto isan-karazany rehetra io... Voasoratra ao anaty Soratra masina daholo izany, fa hianao sy izaho no miambena tsy ho tratran’izany !
Inona moa no tadiavinao sy andrasanao eo amin'ny fiainana ?
Miteny amintsika ny Tompo hoe : Romana 12:2 « Aryaza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao; fa miovà amin'ny fanavaozana ny saina, hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra, dia izay tsara sady ankasitrahana no marina*. [* Gr. tanteraka]. » ary koa hoe Eksodosy 23:2 «Aza manaraka ny maro hanao ratsy; ary aza mamaly ny amin'ny adin'olona hivily hanaraka ny maro hamadika ny rariny. » misy torolalana be dia be ireo, mahagaga anefa ny tsy fanekentsika izany matetika.
Ary maninona isika no tsy tafavoaka mihitsy sy tsy mety tonga amin'ilay tanjona ? satria isika tsy mety mankato ny Tenin'Andriamanitra, henointsika fotsiny izany. Hatraiza no tena fandraisantsika ny Tenin'Andriamanitra ?
Ahoana no ahazoana ny fahatoniana na ny "stabilité" mba hampitoetra antsika eo amin'ny fiadanana manoloana ny toe-javatra rehetra ?
II Korintiana 8:7 "Fa araka nyitomboanareo amin'ny zavatra rehetra, na amin'ny finoana, na amin'ny teny, na amin'nyfahalalana, na amin'ny fahazotoana rehetra, na amin'ny fitiavanareo anay, dia aoka ho araka izany koa no hitomboanareo amin'izaofahasoavanaizao."
1/ Mitombo amin'ny Soratra Masina: io Tenin'Andriamanitra io no miady ho anao sy miasa ho anao.
Na inona trangan-javatra miseho eo amin’ny fiainanao na inona, dia izao fanontaniana izao hatrany apetraka :"ahoana hoy ny Soratra Masina ? " (rehefa miha sarotra ny fiainana...) fa tsy hoe "antsoy Aho dia ho valiako hianao" tsy izany foana no vavaka atao ! tsy mampitombo izany ! Tokony mandeha amim-pahatahorana an'i Jehovah voalohany indrindra (eo amin'ny fiainana manontolo) tsarovy fa ny zavatra mitranga ety ambonin'ny tany dia tsy manova mihintsy ny planin' Andriamanitra sy ny Teniny mihitsy(mosary sy areti-mandrigana...)
Manomboka androany àry diniho daholo ireo trangan-javatra miseho eo amin'ny fiainanao dia mangataha amin'Andriamanitra hoe "inona ny Teny mifanaraka amin'izany ho anao", isika kristiana raha ny tena marina tsy manan-kevitra fa ny hevitry ny Soratra Masina no hevitsika fa raha mbola hianao no mamoron-kevitra dia mbola hevitrao izany. Mivavaha ho an'ny mpitondra sy mpanapaka ary ataovy mifanaraka amin'ny Soratra Masina aloha ny fitondran-tenanao, madio fo sy mahitsy... Lioka 6:28 « misaora izay manozona anareo, arymivavaha ho an'izay manisy ratsy anareo. » Matio 5:44 « Fa Izaho kosa milaza aminareo hoe:Tiava ny fahavalonareo, ary mivavaha ho an'izay manenjika anareo»
2/Mitombo amin'ny fahalalàna ny Soratra Masina: fahalalàna ny fitondran'Andriamanitra ao amin'ny baiboly
Jereo tsara ny tantara manontolo tamin'ny andron'ny Testamenta taloha sy ny tamin'ny andron'i Jesosy, ny Epistily. Firifiry ny mpanompon'Andriamanitra notapahin-doha, martiora ?
Tsarovy fa rehefa mitombo tsara amin'ny Tenin'Andriamanitra ianao dia manomboka tsy mangataka intsony izay heverinao, fa ny zavatra heverin'Andriamanitra atao, izay mihoatra lavitra noho ny fahalalanao Isaia 55:8 «Fa ny fihevitro tsy fihevitrareo ary ny lalanareo kosa tsy mba lalako, hoy Jehovah. » Ny kristiana izany dia mitoetra tsara ka hanao hoe "Tompo ô! aoka ny fihevitrao no ataoko fa tsy ny fihevitro" " ny sitraponao fa tsy ny sitrapoko"- ho feno tebiteby hatrany ny fonao raha vao tsy manao izay ianao satria tsy maheno ilay Rainao ! izany no tsara ahalalantsika ny fomba fitondran'Andriamanitra voalaza ao amin’ny baiboly, izay mifanohitra amin'ny fisainantsika matetika – “ny fihevitro tsy fihevitrareo” (...) . Tsara hatrany anefa no fiafarany : izay no maha Andriamanitra Azy. I Josefa ohatra, raha tsy namidn’ny rahalahiny dia tsy ho voavonjy ny taranany. Genesisy 37:28 « Ary raha nandalo teo ny Midianita mpandranto, dia nakarin'ny rahalahiny niala tao an-davaka Josefa ka namidiny sekely volafotsy roa-polo tamin'ny Isimaelita; ary dia nitondra an'i Josefa ho any Egypta ireo. »
Mety handalo fotoan-tsarotra ianao, tsy maintsy hisy izany ; nefa ny Rainao efa manomana ny tsara ho anao ao ambadik’izany. Tsy ho very fanantenana izany ianao ! Aza matahotra ! - Ankatoavy fotsiny ny Tenin’Andriamanitra renao anio,
3/ Mitombo amin'ny finoana
Rehefa mivavaka isika ka vita ny Amen, dia mila miandry ! aza mieritreritra zavatra be dia be intsony : an'ny Tompo ny sisa, misaora Azy amin'ny fifaliana, matokia ! (Marka 11 – 22, 24) . Tandremo ny manao manao vavaka "routine", fa tsy ahazoana sitraka Aminy izany,
Izay rehetra miseho amin'ny fiainana dia eo am- apelatanan'Andriamanitra. Tsarovy ny tantaran’i Joba. Hoy Andriamanitra : Joba 2:6 « Dia hoy Jehovah tamin'i Satanav: Indro, eo an-tananao izyv; ny ainy tokana ihany no aza asiana. »
Vavaka tsy tokony atao ny hoe "aza asiana an'izao sy izao eo amin'ny fiainako Tompo !"
Hebreo 11:6 «Fa raha tsy amin'ny finoana, dia tsy misy azo atao hahazoana sitraka aminy ; fa izay manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy Izy sady Mpamaly soa izay mazoto mitady Azy. »
Hebreo 10:38 « Ary "ny oloko marina* dia ho velon'ny finoana;" Fa raha mihemotra izy, dia tsy sitraky ny fanahiko (Hab. 2.3, 4). [* (ny marina)]» miaina amin'ny zavatra "surnaturel" ny olombelona feno finoana ka na mandalo fotoan-tsarotra aza dia ampisehoan'Andriamanitra ny heriny izy manoloana ireny. Ny olona manam-pinoana dia manao tahaka an'i Paoly sy Silasy : mihira, na dia ao an-tranomaizina aza, satria mieritreritra hoe “rehefa misaina ny fahasoavanao aho Jesosy dia te-hiantso mafy hoe: Aleloia”, Filipiana 4:4 «Mifalia* mandrakariva amin'ny Tompo; hoy izaho indray: Mifalia*. [* Na: veloma] » satria fantany fa mihaino azy Andriamanitra. Endrika iray fanehoam-pinoana izany ! Fantatry ny Tompo ny momba antsika tsirairay avy, ary izany no tokony isaorana Azy ! manefy antsikatsirairay avy Izy e !
4/Mitombo amin'ny fahasoavana : amin'ny fiantrana ny hafa, ny fitiavana ny hafa
Rehefa mitombo tsara ny olona dia tsy ny tenany intsony no eritreretiny fa mivavaka ho an'ny hafa koa izy. Raha tsaroanao fa nanome zavatra be dia be maimaimpoana ho anao ny Tompo dia manomeza koa (tombon'andro, fahasalamana...) Matio 10:8 « Sitrano ny marary, atsangano ny maty, diovy ny boka, avoahy ny demonia ; efa nahazo maimaimpoana hianareo, koa manomeza maimaimpoana. »
Tsy ho voatanisa ny fahasoavana sy fitahiana omen'Andriamanitra antsika, ary torak’izany koa no ’ndeha hanomezantsika maimaimpoana ho an'Andriamanitra : fotoana, vola, fanomezam-pahasoavana,....
Ahoana no ahazoana miditra amin’ireo dingana voalaza eo ambony rehetra ireo ?
a/Ny fandraisana ny Fanahy Masin'Andriamanitrano manome ny fitonian-tsaina, ny fiadanana ao anaty
Asan'ny Apostoly 19:2« ka nanao taminy hoe: Efa noraisinareo va ny Fanahy Masina, fony vao nino ianareo ? Fa ireo nanao taminy hoe: Tsy renay akory fa efa nomena ny Fanahy Masina. » . Io Fanahy Masina io no manome ny toetran'i Jesosy eo amin'ny fiainanao, eo anatrehan'ny samy mpirahalahy, jentilisa, fahavalo, asan'ny maizina... Manao ahoana Jesosy ao anatinao ao ? aza mijery lavitra, fa io toetranao io aloha jerena. Raha vao misy zavatra tsy mety dia hoy Izy, tsy mety io. Renao ve ny bitsiky ny Fanahy miteny aminao ?
Ao anaty sambokelinao ve Jesosy ? Tsy kivikivy manoloana ny adim-panahy "manoatra noho ny mpandresy" Jesosy dia azo lazaina hoe olon'ny vahaolana Romana 8:37 « Kanefa amin'izany rehetra izany diamanoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tia antsika. »
Asan'ny Apostoly 2:37-38« Ary raha nandre izany ny olona, dia voatsindrona tam-pony ka nanao tamin'i Petera sy ny Apostoly namany hoe : Ry rahalahy, inona no hataonay ? Ary hoy Petera taminy:Mibebaha,ary aoka samy hatao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba hahazo famelana ny helokareo; ary ianareo handray ny fanomezana, dia ny Fanahy Masina»
Tsy azo atao kitoatoa io fa mila fanapahan-kevitra, teneno hoe " manomboka androany Jesosy dia midira ato anatiko Ianao " ary rehefa tafiditra ao anatinao Jesosy dia manomboka mitony ny saina.
Rehefa tonga ao aminao ny Fanahy Masina, mitoetra ao anatinao Jesosy, dia mitoetra ao aminao ny fiadanana. Jaona 14:27 "Fiadanana no avelako ho anareo,ny fiadanakono omeko anareo"
b/ Ny fahafenoan’ ny Fanahy Masina
Eo no tena ilàna ny hery eo satria nanomboka tamin'ny Asan'ny Apostoly dia sahy nijoro vavolombelona ny mpianatra, nanohitra ny asan'ny maizina rehetra, nandresy ny fakam-panahy, ary tsy menatra ny Filazantsara.... Tena manova ny fitondran-tena rehetra ny fahafenoan'ny Fanahy Masina ary sahy hiteny hianao hoe "Tsia ! tsy hanota aho"
Asan'ny Apostoly 1:8 «Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran'i Jodia sy Samaria ary hatramin'ny faran'ny tany. » olona tsy matahotahotra, tsy menamenatra, manana fahasahiana, sahy mandroaka ny fanahy ratsy, sahy mifanandrina amin'ny asan'ny maizina, miatrika ny devoly...
Rehefa manenika ny olona manontolo ny Fanahy Masina ka miasa amin’ny saina, sy fanahy, dia baikon'ny Tenin'Andriamanitra ny fiainany manontolo (izay jeren'ny maso, ny henoin'ny sofina, ny fomba fitafy, ny hohanina...) Lioka 21:26 «ka ho reraka ny fon'ny olona noho ny fahatahorany sy ny fiandrasany izay zavatra ho tonga ambonin'ny tany ; fa ny herin'ny lanitra dia hohozongozonina.[* Na: ka hisy ho faty aza] »
Ahoana no ahazoana ny fahafenoan'ny Fanahy Masina ?
Ny fivavahana maharitra irery : tsy miandry fikambanana na fiangonana na fivoriana fa hianao manokana mihitsy ao an-tokantrano no mivavaka maharitra, na adiny firy na firyamin'ny alina sy atoandro. Ampitomboy ny vavaka ary manàna fahononan-tena amin'ny zavatra rehetra, saino foana ilay Mandrakizay sy ny hoe: ny eto an-tany mora levona.
5/ Mitoetra eo amin'ny Fanahy Masina: "persévérance"
Eto no ikolokoloana ny fiainam-panahy amin’ny alalan’ny fandinihana ny Soratra Masina isan'andro isan'andro, indrindra izay voalazan’ny epistily.
Mangataha amin’ny Tompo fa homeny anao ny teny tandrify amin’izay lalovanao amin’ny fiainanao.
Ny mahatonga ny olona tsy ampy fankatoavana ny Tompo mantsy dia satria ny Fanahy Masina no tsy mitoetra tsara (tsy "stable") ao anatiny.Tsy ampy finoana izy satria ny Fanahy Masina tsy mipetraka tsara ao anatiny.
Ezekiela 36:27 « Ary ny Fanahiko no hataoko ao anatinareo, ka hahatonga anareo handeha araka ny lalàko sy hitandrina ny fitsipiko ka hanaraka azy.» koa raha ianao no manao kitoatoa amin'ny fahamasinam-piainanao dia aza gaga raha toa tsy mitombona tsara ny finoanao, raha vao manomboka misalasala ny finoana ao anatinao dia midika izany fa misy ota ao anatinao ao.Noho izany asaivo anjakan'ny Fanahy Masin'Andriamanitra ny vatanao, ny fonao, ny fanahinao manontolo. Angataho amin’ny teny tsotra amin’i Jesosy izany fa homeny anao !